France: Nin ku qeylinaya “Allahu Akbar” oo 11 ku dhaawacay weerar gaari – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Nin kaxeynayey gaari ayaa magaalada De Dijon ee dalka Faransiiska ku jiiray ilaa 11 ruux. labo ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa xaaladoodu liidataa. Ninkaas ayaa ku qeylinayey “Allahu Akbar”.
Booliska dalkaas ayaa ku guuleystay iney gacanta ku dhigaan ninkii gaariga weday, kaasoo la sheegay inuusan maskax ahaan deganeyn, horayna loogu daweynayey Isbitaal xagga dhimirka ah.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ninka gaariga dadka ku weeraray oo ku jira da’da afartameeyada uu sheegay inuu falkaas u sameeyey carruurta Falastin dartood, kuwaasoo ay dhbaato ku hayaan ciidamada Yahuudda.
Gaariga ninkaani kaxeynayey ayaa la sheegay iney la socdeen labo qof oo kale, hase ahaate ninka ayaa falkaan iskiis ugu dhaqaaqay, sida uu sheegay Afhayeen u hadlay wasaaradda Arrimaha Gudaha Faransiiska.
Afhayeenka ayaa sheegay in ninkaas horay loogu yaqaanay dhacdooyin yar yar oo uu geystay 20-kii sano ee laso dhaafay.
Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska, Bernard Cazenove ayaa TV-da galkaas u sheegay in ninka gaariga dadka ku weeraray uusan aheyn mid degan oo caafimaad qaba.
Dalka Faransiiska waxaa ku nool Jaaliyad Muslimiin ah tan ugu badan dalalka Midowga Yurub, waxaana halkaas ku nool 5 ilaa 6 Milyan oo Muslimiin ah.
Daawo: Waxa ku dhacay guri ku madax adeygay dowladda Hoose ee Istanbul